Home Wararka Saciid Deni oo looga digay in uu bilaabo booob doorasho iyadoon xal...
Saciid Deni oo looga digay in uu bilaabo booob doorasho iyadoon xal laga gaarin dhibkii ka dhacay Boosaaso
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa looga digay in uu bilaabo booob doorasho iyadoon xal laga gaarin dhibkii ka dhacay Boosaaso
Deni oo horay u codsaday in uu la kulmo isimada Gobolka Beri ayaa ugu danbeeyntii ay aqbaleen kulankaas iyga oo diiday in uu qof qof ula kulmo balse ku adkeystay in si wadajira uu ula kulmo salaadiibta.
Sida ay sheegayaan Waan wararka ka imaanaya Boosaaso waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu kulamo kala duwan la yeesho Isimada Gobolka Bari.
Isimada ayaa ku adkeysanaya in xal buuxa looga gaaro Arrimaha ka jira Boosaaso gaar ahaan khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii uu Deni ku sameeyay Agaasimihii Ciidanka PSF.
Madaxweynaha Maamulka Puntland oo maalin kahor tegay magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale kulamo la yeeshay qaar kamid ah Saraakiisha Ciidamada iyo mas’uuliyiinta Gobolka Bari, wuxuuna kala hadlay xoojinta amniga Magaalada oo falal amni darro ka dhaceen.
Si kastaba, Khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii uu Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ku sameeyay Agaasimihii Ciidanka PSF Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa xal laga gaarin, iyada oo dhowr jeer fashilmeen isku dayo lagu doonayey in lagu xaliyo khilaafka.
Previous article(XOG) Kulankii shalay ee beelaha Dagoodi & Murusade- lacagtii Kheyre laga dhacay oo fashil ku dhamaaday
Next articleCiidanka DFS oo wiil dhalinyaro ah ku toogtay magaalada Baraawe
Maxaa ka dhacay Kawaanka Malaayga ee Xamar weeyne ka dib Booqashadii...
Kullan uu ka Qaybgali lahaa Madaxweyne Farmaajo oo La Joojiyay